जब टेलिभिजनका दृश्यले बेचैन बनायो….. | We Nepali
जब टेलिभिजनका दृश्यले बेचैन बनायो…..
२०७२ वैशाख १९ गते १९:२३
लण्डन । शनिबार विदाको दिन । टेलिभिजनका पर्दामा समाचार थिए, नेपालको भुकम्पको । भग्नावशेषबाट पुरिएका मानिसहरु निकालिँदै थिए । अस्थायी शिविरमा थियो घरबारविहीनहरुको बिजोग । परिवारका सदस्य गुमाएकाहरु रोदन ।
एक साता देखिका यी दृश्यले क्याम्बर्लीकी उमा गुरुङलाई सोच्न बाध्य बनायो-अब घर बसेर हुँदैन । भुकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि केही गर्नपर्छ । गर्ने चाहिँ के ? एकछिन गम खाइन् । क्याम्बर्लीमै रेष्टुरेन्ट चलाउने रमेश सराङकोटीसित सल्लाह मागेपछि उनले उपाय दिए क्याबर्ली हाइस्ट्रिटमा सहयोग संकलन किन नगर्ने ?
उपाय नराम्रो थिएन । एकजना साथीलाई साथ लिइन् । ‘नेपाल’ लेखिएको टीसर्ट आङमा घुसारिन् । अनि ‘हेल्प नेपाल’ लेखिएको कागजको पाना बेरिएको एउटा बट्टा टिपेर क्याम्बर्ली हाइस्ट्रिट हानिइन् । जहाँ सो एसिया रेष्टुरेन्टले फुटपाथमा खाना बेचिरहेको थियो त्यहीँ नजिक उभिइन् र आवतजावत गर्नेहरुलाई भन्न थालिन् – नेपाललाई मद्दत गर्नुहोस् ।
मानिसहरु नेपाल लेखिएको टीसर्ट देखेर ‘हामीलाई दुःख लागेको छ’ भन्थे । गोजीमा पैसा भएकाहरुले २० पाउण्डसम्म पनि हाले । कति पैसा नभएकाले क्यास मेशिनबाट निकालेर दिए ।
करिब दुई घण्टा बीचमा उनले ५० हजार रुपियाँ बराबरको डोनेसन उठाइन् । “थोरै/धेरै जे जति भए पनि दुःखमा परेका नेपालीहरुको सहयोगका लागि आफूलाई सरिक गराउन पाएकोमा मेरो मन शान्त भएको छ” जेभलिन प्लाष्टिक उद्योगकी क्वालिटी कन्ट्रोलर रहेकी उनले भनिन् ।
यसअघि यस्ता कुनै कार्यमा संलग्न नभएकी उनलाई अहिले बल्ल थाहा भयो यसरी पनि सहयोग संकलन गर्न सकिँदोरहेछ ।
शनिबारका दाताहरुको प्रेरणाले उत्साहित उमा आइतबारको बिदा पनि सडकमा सहयोग संकलनमा लगाउँदैछिन् । यसरी उठेको सहयोग धेरै ठूलो कुरामा होइन पालमा कष्टपूर्ण रुपमा बसिरहेका केही भुकम्प पीडितलाई दालमोठ चिउरा खुवाउन खर्च गर्ने उनको योजना छ ।
युकेमा सहयोग संकलनको यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।